राष्ट्रिय – Page4– BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय (page 4)
आजदेखि नयाँ नोट साट्न सुरु, कहाँ, कतिसम्म साट्न सकिन्छ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजबाट नयाँ नोट वितरण शुरु गरेको छ । नेपालीहरुको महान चाड दशैंलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले आजबाट असोज २९ सम्मका लागि नयाँ नोट सटहीको सुविधा दिन लागेको हो । नयाँ नोट ५, १०, २०, ५० रुपैयाँ दरका नयाँ २–२ प्याकेट र १ सय रुपैयाँ दरका एक प्याकेट गरी जम्मा २७ हजार रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति सटही सुविधा …
विवेकशील साझा पार्टीले दशैं अघि तीन प्रदेशमा वृहत प्रशिक्षण गरिसक्ने
सुर्खेत । विवेकशील साझा पार्टीले दसैँअघि तीन प्रदेशमा वृहत प्रशिक्षण गरिसक्ने भएको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ५ मा कार्यक्रमहरू गर्ने जानकारी दिएको छ । यसैबीच, विवेकशील साझा पार्टीलेसुदूर पश्चिम प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरू तथा स्थानीय नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। उक्त कार्यक्रममा करिब ६०० जना पार्टी सदस्यहरू तथा नेताहरूले प्रशिक्षण लिएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। कार्यक्रममा …
साहित्यकार सायमी पितृ शोकमा
साहित्यकार प्रकाश सायमी पितृ शोकमा छन् । सायमीका पिता रत्नदास मानन्धरको ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भएको हो । मधुमेहबाट पीडित मानन्धरलाई दुई हप्ताअघि स्ट्रोक भएको थियो । उनलाई उपचारका लागि ललितपुरमा रहेको मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । पिताको उपचारकै क्रममा निधन भएको जनाउँदै माहिला सुपुत्र सायमीले अन्तिम समयमा परिवारका सदस्य पिता साथमै रहेको जनाए । पिताको आइतबार …
पोखरा ५ असोज । स्याङ्जाको भालु पहाडलाई उत्कृष्ट टुरिजम स्पोट बनाइने भएको छ । पर्यटकिय स्थलको रुपमा पहाडलाई थप आकर्षक बनाउन फेदिखोला गाँउपालिकाले गुरुयोजनानै तयार पारेको छ । ४५ करोड लागतको गुरुयोजना अनुसार भालु पहाडमा मानव निर्मित थुप्रै संरचना थपिनेछ । जुसले यो पहाडलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गर्नेछ । पोखराबाट २८ किलोमिटरको दुरीमा सिद्धार्थ राजमार्गको किनार स्याङ्जाको …
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरणमा कोटा तोकेको छ । ट्याकंर चालकहरु आन्दोलित भएपछि ढुवानी आपूर्ति असहज भएको भन्दै सरकारले पेट्रोल, डिजेलको विक्री वितरणमा कोटा तोकेको हो । नेपाल आयल निगमले पत्राचार गर्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशन र वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशनलाई तोकिएको कोटाअनुसार विक्री वितरण गर्न भनेको छ । निगमका अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटरलाई बढीमा पाँच लिटर मात्र पेट्रोल दिन भनिएको …
नेकपाले तोक्यो सातै प्रदेशमा नेतृत्व, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा ईन्चार्ज, हितराज अध्यक्ष, खगराज सह-इन्चार्ज, गोविन्द सचिव
पोखरा । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेशका अध्यक्ष र सचिव तथा इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको नाम टुंग्याएको छ । शुक्रबार विहान बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकाा छन् भने हितराज पाण्डेले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । गुरुङ साविक एमालेका केन्द्रिय सचिव हुन् । उनी हाल गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा कार्यरत छन् …
अनाधिकृत रुपमा संचालन भइरहेका ब्लगहरु र केहि फेसबुक पेजहरुले असोज २ गते मंगलबार नेपाल बन्द रहेको गलत हल्ला फैलाइरहेको बेला विप्लव नेतृत्वले भने बन्द घोषणा नगरेको जनाएको छ । उसो त, माओवादी पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल पार्टीको नाममा फैलिएको विज्ञप्ती पनि आधिकारीक पुष्टि हुन सकेको छैन, । निकै ठूला र भद्धा अक्षरमा फेक देखिने गरी अशुद्ध वाक्यहरुमा बन्द सम्बन्धी विज्ञप्ती …
केन्द्र झस्कने गरी पोखराबाट मुख्यमन्त्री गुरुङले भने -‘राज्य एउटा व्यक्ति,आफ्नो मान्छे बचाउन लाग्छ’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्मला हत्याकाण्डमा एक व्यक्तिलाई बचाउन राज्य नै लागेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार पोखराको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो मान्छेलाई अपराधी नै भएपनि काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले काम गरेको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘राज्य एउटा व्यक्तिलाई, आफ्नो मान्छेलाई बचाउन लाग्छ । यस्तो सिस्टम भयो मुलुकमा …
२८ भदौ,पोखरा । दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिका विभिन्न विद्रोहमा गोर्खा सैनिकका सहभागिता, वीरता र व्यथा बुझ्न महिना दिन अघि थालिएको मेची महाकाली खोज-यात्रा बिहिबार सकिएको छ । कास्की, धम्पुसमा जन्मेका र विगत चार दशकदेखि हङकङलाई कर्मथलो बनाएका लेखक टीम आई. गुरुङले वेलायत, बर्मा, सिंगापुर र मलेशियालगायतका मुलुकको अध्ययन भ्रमण पश्चात् गोर्खाली थाकथलो नेपालको महिना दिने यात्रा तय गरेका थिए । …
पोखरा । पोखरा लेखनाथ महानगरपािलकाको नाम आधिकारीक रुपमा आजदेखि फेरिएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै अव महानगरको नामबाट लेखनाथ हटेर पोखरा मात्रै कायम भएको छ । यससँगै अब काम काज पोखरा महानगरपालिका नामबाटै हुनेछ । गत साउन २३ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले महानगरको निर्णय र प्रदेश सरकारको सिफारिस बमोजिम लेखनाथ शब्द हटाउने निर्णय गरेको थियो । गत असार १२ …